စာရငျးကိုငျဖွဈနပွေီလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ပုရိသတို့ အသညျးစှဲ မိုငျခလီဖာ – Myanmar
September 23, 2020 admin Cele, Entertainment, News 0
လဈဘနှနျ အမရေိကနျနှယျဖှား အပွာမငျးသမီးအဖွဈ အတျောလေးကို နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ မိုငျခလီဖာဟာဆိုရငျ Onlyfans အမညျရှိ ဗွိတိသြှ Content Subscription လုပျငနျးကို စတငျအသုံးပွုနတောပါ။
သူမဟာ အပွာမငျးသမီးအဖွဈ လုပျကိုငျတော့ခွငျး မရှိတော့ပမေယျ့ အငျတာနကျ မျောဒယျ ၊ ဆိုရှယျ အငျဖလူရနျစာ တဈယောကျအနနေဲ့ ရပျတညျနတေုနျးပါ ။ Onlyfans ဝကျဆိုကျအသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ သူမရဲ. ပရိသတျတှနေဲ့ တိုကျရိုကျ ထိတှနေို့ငျခှငျ့ရမယျလို့ သူမက မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနတေု့နျးက သူမဟာ Onlyfans ဝကျဆိုကျကို စတငျအသုံးပွုနပွေီ ဖွဈကွောငျး သူမရဲ. အငျစတာဂရမျကနေ ကွငွောခဲ့တာပါ ။ ကွငွောဓါတျပုံမှာတော့ သူမဟာ ဆူရှီစားရငျးနရေငျး သူမရဲ. Onlyfans စာမကျြနှာကို ကှနျပြူတာမှာ ဖှငျ့ပွထားရငျး “I haveafull time job… as an accountant.” ဆိုတဲ့ စာသားကို ရေးတငျခဲ့တာပါ။
Onlyfans ဟာ လိငျနဲ့ ပတျသတျတဲ့ အလုပျအကိုငျ လုပျကိုငျကွသူတှကွေား ရပေနျးစားတဲ့ အခပေး ကွညျ့ရှုရတဲ့ ဝကျဆိုကျဒျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ခလီဖာကတော့ သူမအနနေဲ့ ဒီဝကျဆိုဒျမှာတော့ လုပျငနျးခှငျမှာပါ ကွညျ့ရှုလို့ သငျ့တျော အဆငျပွတေဲ့ ပို့ဈတှကေိုပဲ တငျသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ခလီဖာအနနေဲ့လညျး သူမ အနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး ပရိသတျတှနေဲ့ တိုကျရိုကျ ထိတှခှေ့ငျ့ရတဲ့ ပလကျဖောငျးကို အသုံးပွုရတာကို ရငျခုနျကွောငျးနဲ့ အတှအေ့ကွုံသဈကို ကနြေပျကွောငျးဆိုထားပါတယျ။ ဒီပလကျဖောငျးကို အသုံးပွုဖို့အတှကျကတော့ တဈလကို ၁၂ ဒျေါလာလောကျ ကသြငျ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပလကျဖောငျးကိုတော့ သူမအပွငျ အခွား နာမညျကြျောတှလေညျး အသုံးပွုနကွေပါပွီ။
စာရင်းကိုင်ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပုရိသတို့ အသည်းစွဲ မိုင်ခလီဖာ
လစ်ဘနွန် အမေရိကန်နွယ်ဖွား အပြာမင်းသမီးအဖြစ် အတော်လေးကို နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မိုင်ခလီဖာဟာဆိုရင် Onlyfans အမည်ရှိ ဗြိတိသျှ Content Subscription လုပ်ငန်းကို စတင်အသုံးပြုနေတာပါ။
သူမဟာ အပြာမင်းသမီးအဖြစ် လုပ်ကိုင်တော့ခြင်း မရှိတော့ပေမယ့် အင်တာနက် မော်ဒယ် ၊ ဆိုရှယ် အင်ဖလူရန်စာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတုန်းပါ ။ Onlyfans ၀က်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သူမရဲ. ပရိသတ်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့နိုင်ခွင့်ရမယ်လို့ သူမက မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့တုန်းက သူမဟာ Onlyfans ၀က်ဆိုက်ကို စတင်အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ. အင်စတာဂရမ်ကနေ ကြေငြာခဲ့တာပါ ။ ကြေငြာဓါတ်ပုံမှာတော့ သူမဟာ ဆူရှီစားရင်းနေရင်း သူမရဲ. Onlyfans စာမျက်နှာကို ကွန်ပျူတာမှာ ဖွင့်ပြထားရင်း “I haveafull time job… as an accountant.” ဆိုတဲ့ စာသားကို ရေးတင်ခဲ့တာပါ။
Onlyfans ဟာ လိင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင်ကြသူတွေကြား ရေပန်းစားတဲ့ အခပေး ကြည့်ရှုရတဲ့ ၀က်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခလီဖာကတော့ သူမအနေနဲ့ ဒီဝက်ဆိုဒ်မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာပါ ကြည့်ရှုလို့ သင့်တော် အဆင်ပြေတဲ့ ပို့စ်တွေကိုပဲ တင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခလီဖာအနေနဲ့လည်း သူမ အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ပရိသတ်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုရတာကို ရင်ခုန်ကြောင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်ကို ကျေနပ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့ တစ်လကို ၁၂ ဒေါ်လာလောက် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းကိုတော့ သူမအပြင် အခြား နာမည်ကျော်တွေလည်း အသုံးပြုနေကြပါပြီ။